DLULA I-Airbus A330-200 Hawaiian Airlines FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 37.6 MB
Play 15 136
Umbhali: Isibonelo sikaThomas Ruth, Ukulungiswa nguDomininik Stahel, Isifiso esihlanganiswe nguChris Evans
Qedela iphakheji yale Airbus A330-243 ngemibala ye-Hawaiian Airlines. Kufakwe i-GPWS ye-Airbus, i-FMC, i-VC nemisindo yangokwezifiso. FSX futhi P3D iyahambisana kufika ku-v4.1 +.
I-Hawaiian Airlines iyi-airline yaseMelika esekelwe eHawaii. Isebenza izindiza ezihamba emakhaya nasemhlabeni wonke ezivela endaweni yayo e-Honolulu International Airport. Ku-2014, ikhonza izindawo ze-30, ngaphezulu kwezindiza zansuku zonke ze-200 futhi isebenzisa abantu be-5,249 (umthombo we-Wikipedia)
Ku-2017 eHawai Airlines Airlines ene-24 Airbus A330-243 esebenzayo (umthombo www.airfleets.fr)